Chii chinonzi Search Engine Spam? | Martech Zone
Chii chinonzi Search Engine Spam?
Chipiri, August 14, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Isu tanga tiri pane yakanaka hombe kick munguva pfupi yapfuura tichinyevera nezvewekutsvagisa enjini yekugadzirisa matekiniki ari kuzokupinza mumatambudziko. Kunyangwe kana yako saiti isiri kutambura nhasi, Google inoenderera nekugadzirisa maalgorithms uye kuyedza matsva ayo achakubata mangwana. Usaedzwa kuti utumire injini dzekutsvaga ... zvinokutora.
ichi Tsvaga Infographic by SEO Book inokufambisa nenzira dzakasiyana dzaunofanirwa kudzivirira kuti usazogadzira zvemukati izvo zvinozonzi seinjini yekutsvaga.
Tags: infographicSearch Engine Optimizationyekutsvaga injini optimization infographicyekutsvaga injini spamtsvaga infographictsvaga spamseo infographicseobook
12 Matanho eSEO Kudzoreredza
SocialTV = Vhidhiyo + Yemagariro + Inopindirana
Aug 15, 2012 pa 11: 44 AM
Mune yako intro, iwe unoti iyo infographic "inofamba iwe nenzira dzakasiyana dzaunofanirwa kudzivirira kuti
hausi kuburitsa zvemukati zvinonzi zvinotsvaga spam. "
Asi kunyatso tarisa iyo graphic inoita kunge inoratidza chinangwa chakasiyana: iyo graphic inoita kunge yakagadzirirwa kushora kana kushoropodza iyo pfungwa yese yeKutsvaga Injini Spam - kana zvirinani kuseka tsananguro yeGoogle nezvazvo.
Ivo vanonongedza, muchikamu chekurudyi-ruoko, kuti Google inoshandisa angangoita ese matekinoroji ayo yaanoona se "akaipa", uye inoratidza kuti ndiwo chaiwo maitiro aya akabvumira Google kuti ibudirire zvakadaro. Kunyanya pasi pechiratidzo ("Ah… saka spam ndi…") zvinoita sekunge kuri kuseka pfungwa ye "yekutsvaga injini spam" uye / kana kuratidza kuti injini yekutsvaga spam inzira yekutengesa inovimbisa uye inoshanda.
Ndedzipi pfungwa dzako pane izvi? Iwe unoona iwo iwo iwo meseji mune iyo infographic yandinoita?
Uye kana zvirizvo…. unobvumirana neshoko irori here?
Aug 15, 2012 na12: 39 PM
Ini zvechokwadi ndinoona chinhu chimwe chete icho chaunoita, Greg. Ndiri kunyumwira maitiro eGoogle pazvinhu izvi futi - asi ivo ndivo shefu uye isu tinofanirwa kutevedzera zvavanoda… kunyangwe zvikaisa muhomwe.